Aala-Sucuud oo saddex maalmood lagu amray inuu kaga guuro gobol kamid ah Yaman. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Jun 12, 2019 597 0
Al-muhra oo kamid ah gobol kamid ah wadanka Yaman, islamarkaana xiga dhanka xuduud beenaadka Yaman iyo Cummaan, ayaa dadka degan waxay ciidamada maamulka Aala-sucuud u qabteen in muda saddex maalmood ah uga guuraan guud ahaan gobolka.
Odayaasha dhaqanka iyo dadka hormuudka u ah bulshada ayaa sheegay iney qaati ka taaganyihiin hab dhaqanka ciidamada maamulka Aala-sucuud oo ay ku tilmaameen iney tahay boqortooyo gumeysi ah, iyagoona sheegay iney doonayaan iney dhulkooda uga baxaan.
Bayaan kasoo baxay dadka degan gobolka Al-muhra ayaa lagu sheegay in 72 saacadood ay u qabteen cidiamadan iney uga guuraan guud ahaan gobolka Al-muhra, haddiii ay taasi dhici weysana ay dagaal diyaar u yihiin.
Ciidamada maamulka Aala-sucud ayaa saldhigyo iyo baro kontrool oo hor leh ka sameysanaya degmada Xowf iyo marinka Siirfiit oo isku xira dalalka Yaman iyo Cummaan.
Masuul u hadlay dadka gobolka ayaa sheegay iney diyaar u yihiin iney difaacaan dhulkooda iyo naftooda, haddii ciidamada maamulka Aala-sucuud uga bixi waayaan gobolka Al-muhra waqtiga loo qabtay.